BTB080060-M1D19200 0.80mm fifandraisana roa sosona Board-to-Board 2 * 30P Male Connector Mated Haavo = 7.0-8.5mm
Kitapo fanaovana maria: tsingerina 50
Fizarana isa: BTB080060-M1D19200
Haavon'ny mariazy: 7.0-8.5mm
Miasa mari-pana: -25 ~ degre 85
Fifanoherana amin'ny fifandraisana: 60 mΩ Max
Mandefasa mailaka aminay Misintona Datasheet
Izahay dia manome SlimStack Board-to-Board / 0.35mm pitch Board-to-FPC Connectors / ho an'ny mpanjifa manerantany.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny vokatra solosaina sy peripheral, vokatra elektronika niomerika, vokatra elektronika fifandraisana, vokatra elektronika fiara, vokatra elektronika fantsona, vokatra elektronika ara-pahasalamana ary fitaovana elektronika ao an-trano, sns.
Izahay dia mifanaraka tsara amin'ny fenitra momba ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001 / ISOI14001 ho an'ny fifehezana kalitao. manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina.
Insulator Lcp mainty UL94V-0
Fametahana ny mpampitohy Phosphor Bronze, Tin 100U ”Amin'ny solder tailSelectived volamena amin'ny faritry ny fifandraisana.
Karazan'ny karatra micro SD Phonsphor Bronze
TOSIKARATRA miasa 60V AC / DC
Naoty ankehitriny 0,5A / Pin
Diélectric misy herinaratra mahazaka 500V AC
Temperature miasa -25– + 85 degre
Halavan'ny hamandoana 95% RH Max
Fanoherana insulation 800 OM Ohms min.amin'ny 250VDC
Mifandraisa amin'ny hery fitazonana 100gf Min isaky ny fifandraisana
Tahan'ny malefaka 50V
Mifandray amin'ny fanoherana 60 MAX
Tsingerin'ny fanambadiana Tsingerina 50
Marka kendrena sy fampiharana
Fitaovana Telecom / Datacom
Solosaina avo lenta
Karatra fanitarana sy karatra fanitarana
Fitaovana fitsapana sy fandrefesana
Endri-javatra vokatra Tsingerin'ny fiainana maharitra (in-30 mahery); fanoherana ny hafanana avo; Modely fampiasa matetika;
Fonosana mahazatra 5000 pcs
Fe-potoana 2 herinandro
Andininy fonosana: Ny entana dia feno fonosana roulement & tape, miaraka amina fonosana banga, fonosana ivelany dia ao anaty baoritra.
Andininy fandefasana: Misafidy orinasa fandefasana entana iraisam-pirenena DHL / UPS / FEDEX / TNT handefa ny entana izahay.
Ny orinasa dia manana ekipa mahay R&D sy mpitantana, ary ambaratonga voalohany amin'ny fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fanandramana marina. Ny tsena anatiny dia any atsimon'i Sina, taratra manerana ny firenena, ny tsena iraisam-pirenena no lehibe any Hong Kong, Taiwan ary ny mpanjifa manerantany.
Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny:fampitaovana, fifandraisana, fiarovana, fitaovana ara-pahasalamana, motherboard motherboard, switch misy programa, fakan-tsary niomerika, LED photoelectricité, sns.
Ny tarehin'ny fampanjariana mafy ny fangatahana, ny ivon'ny R&D mahery, ny mpamokatra bobongolo ary ny foibe fanodinana, izay afaka mahatakatra haingana ny filan'ny mpanjifa, manome ny vokatra OEM / ODM miaraka amin'ny vokatra azo antoka indrindra sy ireo mpampifandray tsara indrindra ho an'ny mpanjifa samihafa.
Teny lehibe: manolotra mpampitohy an-tariby lahy sy vavy 0.8mm izahay / 0.8mm pitch 60Pin Board-to-Board Connectors / Board to Board Pitch 0.8mm Male Type Connector / Circular Connector Pcb Board To Board Women Header 0.8mm Pitch / Surface Mount Smt Type Board To Board Male Plug Connector, nanondrana ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay.
1. Ny vokatra rehetra dia voasedra elektrika 100% alohan'ny fandefasana, miantoka ny fahombiazan'ny optimum.
2. Azo alaina foana ny santionany. (Tongasoa foana ireo sary na famaritana ilainao.)
3. Ny fanontanianao na ny fanontanianao dia ho voavaly ao anatin'ny 24 ora.
4. Serivisy tsara aorian'ny fivarotana
5. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa misy antsika amin'ny fotoana rehetra.
6. Fotoana fohy hitarihana
Fandefasana: Manohana ny fandefasana entana, ny fitaterana an'habakabaka, ny fitaterana an-dalamby ary ny fitaterana an-dranomasina izahay.
Teo aloha: FPC03045-42201 FP C0.3mm XP SMT H = 1.0mm Open Type Black mpampifandray ampiasaina amin'ny finday Fampahalalana momba ny vokatra
Manaraka: Alternative Micro fit 3.0mm pitch tariby hipetraka amin'ny terminal trano sy lohateny
0.35mm Pitch Board-To-Board Connector
0.5mm Pitch Smt Board-To-Board Connector
Mpandray anjara amin'ny birao fidirana ambany